महगो हो, भ्रष्टाचार नभए के हो ?
काठमाडौं । कोरोनाको संक्रमित भएका र शंका लागेका विरामीहरुको उपचारमा चाहिने मेडिकल सामान नभएर ठूलो अर्को संकट उत्पन्न भएको बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयको जुन गैरजिम्मेवारी देखिएको छ, त्यसबाट यो सरकार सेवाभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त छ भन्न अप्ठेरो मान्नु पर्दैन ।
चीनबाट पहिलो खेप उपचार सामाग्री खरिद गरेर ल्याइयो । चीन सरकारले सरकारी दरभाउमा सामान दिन्छु भन्दाभन्दै प्रान्तीय सरकारसँग दलालमार्फत खरिद गरियो र यो खरिदमा भ्रष्टाचार गनाएको छ । धेरै गनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्पष्टीकरण आयो केही महँगो भएको होला, अनियमितता भएको छैन । महँगो हो भनेर स्वीकारेपछि भ्रष्टाचार नभए के हो यो ?
नपाएर महँगो तिरेको होइन, चीनले सरकारी रेट भन्दाभन्दै किन दलालमार्फत महँगोमा खरिद गरियो । कतिपय समाजसेवीले सहयोग गरेका सामान पनि आएका छन्, ती सामानको रेट र नेपालले किनेको त्यही सामानको रेटमा आकाशपाताल फरक परेपछि भ्रष्टाचार त भएकै हो । यस्तो बेलामा भ्रष्टाचार ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले एन ९५ मास्क, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपेमन्ट (पीपीई) लगायतका उपकरणको पहिलो खेप आइतबार राति काठमाडौं ल्याएको हो । तर एन ९५ लगायतका मास्कको महँगो मूल्यमा किनिएको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना भएको छ ।
प्रमाण बोलिरहेकोछ, मन्त्रालय र स्वास्थ्यसेवा विभाग अनियमितता नभएको भनिरहेको छ । बुझौं ।
सिचुवान प्रान्तले पीपीईको २ हजार भने पनि हामीले १९१९ मा खरिद गरेको भनियो, एउटा मास्कको ७ डलर, यसबारे विभाग र मन्त्रालयले प्रष्ट पार्न सकेन ।
चिनकै गोन्जाउमा १५ बर्षदेखि व्यापार गरिरहेका नवीन बिकले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई खुलापत्र पठाएर यी मेडिकल सामग्रीमा करोडौं भ्रष्टाचार भएकोले ३ करोड नेपालीको स्वास्थ्य र तिनका जिन्दगी र भबिष्यसँग खेलवाड गरेको दावी गरेका छन् । उनले भनेका छन्– यो पापले तपाईको सात पुस्तालाई पोल्नेछ । उनले ५४ करोड ५४ लाखको भ्रष्टाचारको फेहरिस्त देखाएका छन् ।
१९ प्रकारका मेडिकल सामान आयातको अनुमति दिइएको छ । ३ खेप गरेर ती सामान नेपाल ल्याइनेछ । पहिलो खेपमै भ्रष्टाचार यसरी गनायो । कोरोनाको महामारीको विपत्ति टार्न मगाइएको सामानमा कमिशनको चक्कर ? सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार एन ९५ मास्कमा देखिन्छ । बजारमा ३ सय ५० मा पाइने यो मास्कलाई ८ सय भन्दा बढीमा खरिद गरिनु नै भ्रष्टाचारको अर्को महामारी हो ।